Radio Don Bosco - Ny kalitaon'ny hena...
Noho ny halafosan'ny provandy no antony voalohany mahatonga izany hoy Andriamatoa Ratefiarison Mandrindra, teknisiana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ; ka nahatonga azy nanoratra boky mba ahafahan'ny tantsaha eny ambanivohitra sy ireo misehatra amin'ny fiompiana hahaleon-tena manamboatra provandy. Voarakitra ao anatin'izany boky ahitàna pejy 72 izany ny raiki-pohy amin'ny fanamboarana provandy ho an'ny akoho amam-borona, ny omby vavy be ronono, ny kisoa... Nandritra ny fotoanan'ny fihibohana teto amintsika tamin'ny taon-dasa no namolavolany azy. Mandrindra ny fanoratana ny boky ary ny volana novambra lasa teo no namoahany izany. Efa hita eny amin'ny toeram-pivarotam-boky, indrindra ireo mivarotra ny boky momba ny fiompiana sy ny fambolena ity boky ity...